Verenga yangu Kudya uye tora 12 Mwedzi ye Mahara Webhu Kubata | Martech Zone
Muvhuro, April 2, 2007 Douglas Karr
Ingoda kukupa iwe wese misoro kumusoro! Iyo yekutambira kambani yandiri kushanda nayo iri kupa gumi nemaviri mwedzi yekusununguka kuitisa kana iwe uchinyoresa. Shamwari yangu, Amol Dalvi ndiye wekutanga kuyedza chibvumirano. Ndizivise kana iwe ukatora mukana wechibvumirano uye ini ndichave nechokwadi cheku blog pamusoro pako kuti ubatsire kusimudza chinzvimbo chako.
Ini ndakasarudza wandinogashira mushure megore rekusvetuka kubva kumubati kuenda kumubati. Ini ndakatsungirira nguva yekuzorora, kutsigira kunotyisa, kukwidziridzwa zvishoma, mabasa… kusvikira ndaenda naJumpline. Ndakawana Jumpline nekuita yekuchera pamusoro Netcraft kwandakaongorora mauto neepasi mitengo yekutora. Izvo zvakapwanya kuti Jumpline akange aine angangoita asina kupunzika uye aive neimwe yakanakisa nguva muInternet.
Ndakafambisa nzvimbo dzangu dzese (dzinenge makumi maviri neshanu) kuenda kuJumpline uye ndave ndichifara kubva ipapo. Vanomhanya maazvino uye makuru maapps kuburikidza neyakareruka VDS. Kana iwe uchida MySQL, ingotinya uye yaiswa Unoda PHP? Zvakafanana. Iyi ndiyo yekupedzisira package yeiyo technophobe uyo anotya nezvese izvi zvekutambira mumbo-jumbo. Ivo ndivo mhando yevaunonyorera iwe uye kukanganwa iwe waunofanira kumbonetseka nezvawo.
Kuti utore mukana wekupa, Nyorera kuchikafu changu uye iwe uchaona yekushambadzira mureza pasi peimwe posvo. Ichi kupihwa kuchakwidzwa kwemasvondo maviri anotevera evaverengi vangu. Tora mukana wacho! Hapana tambo dzakabatanidzwa!
Ndinongoda kuti titende zvakare nekurumbidza Jumpline kwandiri masvondo mashoma apfuura. Kufambisa rangu blog reWordPress kune iyo nyowani mushanyi yaive mhepo uye iyo Jumpline mushandisi yekudzora pani inoita kuti zvive nyore kupa zvinhu senge MySQL, email kero, nezvimwe.
Ini ndinonyanya kufarira iyo chaiyo yekutambira yavanopawo. Ndine yangu yega Apache server izvozvi, saka hapachina mapenzi ekurovera iyo yakagovaniswa Apache server senge ini ndaive neyangu yekare host
Ndakave nebhurogi rangu richimhanya paJumpline kwemavhiki mashoma ikozvino uye kusvika zvino zvakanyanya kunaka.
Nhanho yakanaka nekusimudzirwa uku.
Ndatenda, Dean! Handidi kuisa mukurumbira wangu kumashure kwekambani kunze kwekunge a) ndaivashandisa uye b) Ndinovimba navo. Ini ndakapa Jumpline munguva yakapfuura kuvaverengi vangu asi kwete izvi zvinehasha. Ini ndango verenga dzakawanda kwazvo nyaya dzinotyisa munguva pfupi yapfuura yekuzorora, kutsigirwa kwakashata, uye wangu mukuru pet pet peeve - ekare shanduro dze software!
Imwe yemapulagini andakanyora ndakawana TONS dzekupindura kuti yakanga yatsemuka uye isingashande - apo zvese zvayaive zvekare ndedzeshanduro dzekare dzePHP kana shanduro dzaive dzisina maraibhurari akajairwa akatakurwa kana kugoneswa.
Saka - ndakafunga kuisa mari yangu pane mukanwa mangu. Kana ikasashanda, ndine chokwadi chekuti ndichanzwa nezvazvo!
Hmm inonzwika kunakidza. Ndiri kutarisira kushandura wandinogamuchira iye zvino uye chii chiri nani pane izwi remuromo rinokurudzira kubva kune tekinoroji nyanzvi. Ini ndinofunga imma inotora mukana weichi chipo.
Edza mahara-whd.com, Iyo yakanaka yemahara webhu dhairekitori. Ndine chokwadi chekuti iwe uchawana yemahara webhu inomiririra iwe yauri kutsvaga.